Izindaba - Izikhali Ezenzakalelayo Zomshini Inguquko Yenqubo
Esikhathini esingengakanani esidlule, uZhengchida ubenamalungu amasha ku-workshop, abalethe ngokusebenza okuphezulu kanye nekhwalithi engcono kwimikhiqizo. Yizikhali ezizenzakalelayo zemishini.
Iphrojekthi yokuthuthukiswa kwemishini ezenzakalelayo yaqalwa ekuqaleni kuka-2019. Ithimba lonjiniyela abanolwazi lamiswa njengeqembu elisebenzayo lale phrojekthi. Ithimba lithathe isikhathi eside ukwenza ucwaningo nokutadisha kwabakhiqizi abaningi bemishini nasemibonisweni yemishini. Onjiniyela abazinikele baxhume ubuchwepheshe obuphambili nezinqubo zokwenziwa kwensimbi yokugunda utshani, futhi ekugcineni baba nempumelelo enkulu eletha lula nezinzuzo ezinkulu enkampanini, Ezinqubo zokwenziwa zendabuko, ukwenza umshini owodwa wokugunda, izosebenzisa imishini eyahlukene ephethwe abasebenzi abahlukene, njengomshini wokuvala, umshini wokushaya, umshini wokusika noma wokugaya, ukwakha umshini njalonjalo; kepha ngosizo lwe-Automatic Mechanical Arms, zonke lezi zinqubo zingenziwa ngomshini owodwa ngasikhathi sinye.
Lokho impela inguquko. Ukuthuthuka kusobala:
Isikhathi esincane. Kufinyeze izinyathelo ezimbalwa ukuze kube isinyathelo esisodwa esilula. Hhayi kuphela ukuthi isikhathi sokusebenza sifinyeziwe, kepha futhi nesikhathi sokuhamba sisuka komunye umhlangano wokusebenzela siya kwesinye.
Umsebenzi omncane. Ngendlela yakudala, kudinga abasebenzi aba-3-4 ukwenza insingo eyodwa, ngenkathi manje isisebenzi esisodwa kuphela esanele, futhi konke okumele akwenze, ukubuka iso emshinini ukuqapha ukusebenza.
Ikhwalithi engcono. Imisebenzi ezenzakalelayo yeMechanical igwema iphutha noma ukuphambuka okungadalwa yimisebenzi yezandla. Iphakamisa izinga lokunemba, ukunemba nokusebenza kahle ngesikhathi esishiwoyo.
Ukuzenzakalela Okuzenzakalelayo kungumkhuba wokuthuthukiswa komkhakha. IZhengchida izolandela lo mkhuba, futhi izoletha noma idizayine imishini yezobuchwepheshe esezingeni eliphakeme ukuthuthukisa ikhwalithi nokulawulwa kwenqubo.